Ngokuvamile kwasebekhulile kukhona spasm of izitsha ubuchopho, izimpawu zazo wezwakalisa njengoba ikhanda, isicanucanu, isiyezi kanye inkulumo kahle. Uma imbangela sifo useshonile, kungase futhi zenzeka ubuhlungu uhhafu kwesokunxele noma kwesokudla umzimba.
Ngokuvamile, abantu abadala babe spasm yegazi zobuchopho, izimpawu zazo - a disorientation nememori iphelelwa isikhathi. Iziguli ezinjalo optic abadinga ukunakekelwa njalo ezizungezile nabathandekayo babo. Abakwazi ukuhamba indlu futhi akazange uthole indlela emuva, sikhohlwe ukuvala igesi namanzi. Ezinye musa ngisho negama lakhe isabona abathandekayo.
Yiqiniso, unina Kufanele kwaziwe kodwa ukuthi umuntu onjalo ogula kakhulu, hhayi nje kusuka imizamo amanye zezingane ukuxhashazwa ukuba casula ukunakekela abantu abaseduze naye. Ngakho-ke kuyinto ngokuphelele ingamukeleki zisebenzisa asebekhulile, "bawela ebuntwaneni," ubudlova obungokomzimba noma isichotho indawo. zindlela "imfundo" engalethi nhlobo ezinhle, kodwa kuyonezela sifo.
Uma ngenxa ukopha ebuchosheni kukhona spasm imithambo palsy, izimpawu kungase kubonakale sengathi isiguli bayazi, kakhulu imisiwe ephendula izicelo zabanye, angeke bakwazi ukukhuluma noma ukhuluma buthule kakhulu, ayigcini ukudla emlonyeni wakho.
Ngokuvamile ukuthi ikhanda isiguli kwenzeka ngesikhathi asemkhathini ingcindezi izinguquko, izinguquko izimo kazibuthe omhlaba noma ezingeni lokushisa elifanele. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka spasm cerebrovascular, izimpawu zazo ziye achazwe ngenhla. Ikakhulukazi ngokuvamile kwenzeka kubantu abanegciwane meteodependent nezitsha ebucayi.
Ngokuvamile kukhona vasospasm palsy, ogama izimbangela amanga isiguli khona ezinye izifo, ezifana osteoarthritis. Bazilyanye imithambo asinikeze amathambo wesibeletho futhi ezisebenza imisebenzi ethile umthamo wegazi ogciniwe zobuchopho ukuba onomfutho ngenxa ukuvaleka we orifices noma occlusion ngokushesha lezi zitsha. Lokhu kuholela ukuphazamiseka igazi eligciniwe ebuchosheni egcwele. Lokhu kudinga ukwelashwa olunzulu ngaphansi kokuqondisa vertebrologist udokotela. Kufanele alibale a kudokotela wezifo, kanye ukuzinyeza medicate. Nge ikhanda njalo kudingeka ukubona kudokotela oyisazi sezinzwa ngezindleko, uma udokotela esolwa ukhwaliti ubuhlungu emuva, ziyodlulisela isiguli vertebrology.
Vele indlela yegazi yezingalo ikhanda unempilo, kungenziwa kulinganiselwa usebenzisa reoen - cephalogram (Reg). Ukutadisha okunjalo kungenziwa yimuphi umtholampilo ezinkulu. Uma Reg selukhombisile ukuthi une spasm yegazi ikhanda, impatho zizosebenza ekusebenziseni izidakamizwa antispasmodic. Ezinye iziguli kusiza analgesics kanye amalungiselelo eziyinkimbinkimbi, okuyinto dilates imithambo yegazi. Khumbula ukuthi ngeke ukwazi ukusebenzisa imikhiqizo multi-ingxenye equkethe analgin ukusabela iguliswa ke. Zonke imithi Kufanele umise u-udokotela.
kwaba nemiphumela emibi kakhulu kungenzeka uma useshonile, okuyinto eyenzeka ngenxa izinguquko elimazayo ezindongeni umkhumbi. Lokhu kuyimbangela ikhanda, ubuthongo isiphithiphithi uphazamise nezimoto Ukuwohloka isimo jikelele umuntu osekhulile, futhi esikhathini esizayo kungabangela ngisho infarction palsy.
Ngaphezu kwalokho, izizathu lesi sifo kungase kube ukukhubazeka ahlukahlukene semithambo imisipha ungqimba, Imicu yotshani noma semithambo umonakalo imithambo noma ukulimala semithambo ulwelwesi nokunwebeka.
Ekwelapheni spasm semithambo kahle imithi herbal. burdock Common kungaba yenza aphuze ebusuku ingilazi ukumnika. Valerian kusiza ekhemisi nezinkokhelo tincture.
izidakamizwa abaningi izitsha ekwelapheni kukhona plant-based. A decoction of amaqabunga periwinkle encane aqede ngokuphelele ubuhlungu futhi kuthuthukisa isimo lesiguli.
Uma ubuhlungu bekhanda Kuvame kakhulu ekuseni, imbangela zibe Cishe - nobunzima outflow wegazi emithambo yegazi izitsha ingqondo. Lapho ukwelashwa sekudlulile iphumelela kakhulu kunokuba wena nje ukusetshenziswa kwezidakamizwa ukuthi ngcono emithambo yegazi ukugeleza kwegazi. Lapho izimpawu zokuqala enqabayo kudingeka uvale noma kakhulu ukunciphisa inani osikilidi ngabhema. Ngokwemvelo, ukwenqaba utshwala kuyinto ekuvimbeleni ongaphambili yisiphi isifo. Yiso kanye ke abantu iyiphi ezhedvenno yobudala emgwaqweni, kungcono in the ibhande eliluhlaza komuzi, endaweni evulekile, ukulandela umbuso kosuku. Futhi iphuzu elibaluleke kakhulu hhayi kuphela ukwelapha umuntu asebengenwe igciwane, kodwa futhi njengoba isilinganiso eqinile yokuvimbela - ubuthongo enempilo elizolisayo. Udinga ukuya embhedeni ngesikhathi futhi njalo engcono phakathi kwamabili.
Ubumpunga - indlela yokuphatha
Ischemic unhlangothi-cerebral: izimbangela, izimpawu kanye nemiphumela kungenzeka
Indlela ukungena ekhaya lasebekhulile? Ungamazi kanjani e impesheni ekhaya lasebekhulile?
Ngokwezibalo, abantu aba maningi amathuba okuba ube ujabulile engu-65 no-79
"Ngena ebhokisini," Mamleev: isifinyeto esifushane, abalingiswa abakhulu, izinkinga
"Mercedes 221" - imoto German for the Ongoti of izinga nobuhle kweqiniso
Umuthi 'Profertil ": Izibuyekezo zabantu. Umuthi 'Profertil ": Ukwakheka, yokusetshenziswa, izinkomba kanye nokubuyekeza
China yakha Itheleskopu yerediyo ine ezingaba ukubona izimpawu zokuphila at ibanga izigidigidi light-years eMhlabeni